Hlola iManila, Philippines - World Tourism Portal
Hlola iManila, Philippines
Ongakubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eManila, Philippines.
Ongakwenza eManila, Philippines.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeManila
Bukela ividiyo ekhuluma ngoManila
Hlola iManila inhlokodolobha ye Philippines nendawo yesizwe yezemfundo, yamabhizinisi nezokuhamba. IManila inedumela njengehlathi elihlanganisiwe, elingcolisiwe lukakhonkolo, futhi imvamisile ukunqotshwa njengendawo yokumisa yabahambi ihlose ukufika kwezinye izifundazwe noma iziqhingi zasePhilippine. Ngokwezinga elithile leli dumela lifanelwe, kepha iManila ikhula ngokushesha futhi inomlando wayo ocebile kanye namava ongawanikeza. Idolobha liyaphithizela, liyaphithizela, futhi lihlangana nenkambiso yamasiko, linamagugu ahlukahlukene namasiko ahlukahlukene nobusuku obuhlukahlukene.
Kwadlula amakhulu amathathu eminyaka uManila ekoloni futhi ephethwe yi Spain eshiye ifa elingapheli lezakhiwo kulo lonke elasePhilippines, ikakhulukazi maqondana namasonto, izinqaba kanye nezinye izakhiwo zamakholoni ezingabonakala emanxiweni e-Intramuros, akhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-16th. UManila waqala njengendawo yokuhlala osebeni lomfula iPasig, futhi igama lawo lisuselwa kwelithi “Maynilad,” ebhekisa esitshalweni sem mangango esaziwa ngokuthi i-Nilad, esasigcwele kule ndawo. Ngaphambi kokufika kweSpain ngekhulu le-16th, iManila yayiyikhaya lamaSulumane-Malay, ayevela emadlozini ama-Arabhu, amaNdiya, ama-East Asians kanye namanye amaSouthheast Asia E-1571, eminyakeni eyi-50 ngemuva kokutholakala kukaMagellan kulezi ziqhingi, umgadli waseSpain uMiguel López de Legazpi wathi iPhilippines iyikoloni futhi yamisa iManila njengenhloko-dolobha yayo.
IManila inesimo sezulu sase-savannah esishisayo futhi kanye namanye amaPhillipines asendaweni ephelele yezindawo ezishisayo. Lokhu kusho ukuthi idolobha libhekana nokuhlukahluka okuncane kakhulu kwesizini, ngenkathi umswakama uphikelela unyaka wonke (i-74% ngokwesilinganiso).
Yize kunezilimi ezingaphezu kwezingu-170 zomdabu ezisetshenziswa nsuku zonke, eziqondwa kabanzi futhi, kanye nesiNgisi, olunye lwezilimi ezimbili ezisemthethweni, ulimi lwaseManila sisiFilipino futhi luvame ukukhuluma emizini eminingi. IsiNgisi sikhulunywa kabanzi naseManila. IsiNgisi siwulimi lukahulumeni kanye nenketho ekhethiwe yokuxhumana okubhaliwe okusemthethweni, kungaba esikoleni noma kwebhizinisi.
Amabhange namahhovisi okushintshana ayatholakala esikhumulweni sezindiza futhi ngeshwa, anikela ngamanani angcono kunabaguquki bemali abaningi kwenye indawo eduzane nedolobha. Akukho khomishini. Iningi lamabhange ajwayelekile angaphandle kwesikhumulo sezindiza lizoguqula kuphela imali yakwamanye amazwe libe ngamakhasimende abo ukuze uzophoqeleka ukusebenzisa umshintshi wemali. Ukude ngokwedlulele ukusuka endaweni yabavakashi, futhi esiseduzane kuyo kuzungeza imakethe yedolobha noma yedolobha, kungcono izinga lokushintshana. Ukuphepha akuyona inkinga ikakhulukazi uma uzishintsha ngezikhathi ezimatasa (ukuphepha ngamanani). Qiniseka ukuthi ubala yonke into futhi uzigcine ziphephile kumuntu wakho ngaphambi kokuba uhambe.
Imali ingakhishwa kwa-ATM futhi nayo ikhona yonke indawo. IPhilippines ingelinye lamazwe anemishini ye-ATM etholakala kakhulu nge-capita ngayinye.
Amakhadi Esikweletu amukelwa cishe yonke indawo ikakhulukazi kuzo zonke izitolo eziphakeme.
Ingxenye yenhlokodolobha ebabazekayo yasePhilippine iyimbumba ephakeme yamasiko e-Asia, i-Oceanic, kanye ne-Latin, aminyene anomlando nokunambitheka okuhambisana nezintshisakalo zabahambi. Indlela engcono yokuthola umuzwa wokuthi uyothenga iManila ukuya 'kuyi-tiangge', imakethe yezitolo lapho konke kungagcinwa khona. Imakethe! Imakethe!, ISt. Francis Square, iGreenhills Shopping Center neTiendesitas ePasig City ziyizibonelo zalokhu. Kunezindawo zokuthenga ezilungiselela imisebenzi yezandla, izinto zasendulo, kanye nezikhumbuzo zesimo somusa we-curio. Ngaphandle kwase-Ilalim ng Tulay eQiapo kukhona izitolo ezisezifundeni zase-Ermita naseMalate ezungeze uM. Adriatico, A.Mabini, kanye noMH del Pilar.
Uma unentshisekelo yezitolo zohlobo lweNtshonalanga, awukwazi ukudlula iSM Mall of Asia, njengamanje i4th mall enkulu emhlabeni. Isexwayiso kuma-shopaholics nabalingani babo: Ungahlala usuku lapho kodwa ungaziboni zonke izitolo noma unesikhathi sokushibilika eqhweni. Kulungile, kukhona ne-ice rink.
AmaManilans, noma amaPhilippines ngokuvamile angabenzi bokubi, amaPhilippines ahamba ngokucebile Thailand, Malaysia, noma i-Indonesia, futhi ngokwezinga elithile, ukuncintisana neJapan neChina ezitolo ezinkulu ezitolo. Kungcono ukubona leminyuziyamu ephilayo ukuze uqaphele indlela yokuziphatha namasiko asePhilippines.
Izimakethe zomphakathi ziyi-microcosm eyodwa yeManila. Empeleni, Manilans avela kuzo zonke izigaba zokuphila eza lapha ukuzothenga izidingo zabo zansuku zonke. Zinhle futhi zimibalabala njenganoma imiphi imakethe eThailand, eLaos, eCambodia, noma eVietnam. Ngokuvamile, zihlukaniswe izigaba ezimanzi nezomile nenye ingxenye yokudlela. Ukudlela kushibhile kakhulu futhi kungaba yi-onesolly hygenic.
Uma kwenzeka ubona cishe yonke iTom, uDick, kanye noHarry endaweni emnyama egcwele eManila egqoke i-Abercrombie & Fitch & Levis jean, amathuba ukuthi awangempela futhi athengwa kwa-Ukay Ukays. Bangakwazi kanjani ukuyikhokhela? Ukay Ukay impendulo. Yimpendulo yePhilippines yeSalt Army. Namuhla, kukhona yonke indawo futhi amaManilan ayabathanda. Ukay ukay kwenzeka njengokuphambuka kwegama lesiTagalog elithi “Hukay” elisho ukumba, incazelo yesenzo esiqondile esenziwe ngenkathi kugijimiswa imigqomo yezingubo. Kepha empeleni azikho imigqomo ezifakiwe kulezo zitolo, kuphela izingubo ezilengiswe kahle emigqeni. Ngokwesilinganiso esingaphansi kwe- $ 2, umuntu angangitholela izimfanelo ezinhle zokugqoka ezifakwe uphawu. Abamangazayo bahlinzeka ngokulethwa kwezidingo zasekhaya nezinsizakalo zokuzula ngokuzilengisa kuma-racks afakwe kuma-pedicabs, ngoba enza ukugijima komakhelwane. Uma kubhekwa izindleko ezingenakufinyeleleka zokuphila kwabaningi abaphakathi nendawo kanye namanani entengo kaphethiloli akhuphukayo, bangahle babe lapha.
Kuhle futhi kumvakashi ohlela isabelomali ongeke afune ukuba nokuhlupheka kokupakisha nokuphatha amathani wezingubo ngokumane azithenge lapha, bese ebalahla ndawo thile njengoba izinqwaba zakhe zesikhumbuzo ziqongelela.
Qiniseka ukuthi uyayithenga i-barong Tagalog yendabuko. Lawa amahembe amade enziwe ngezinto ezisindayo kakhulu, ezibonakalayo ezi-translucent, imvamisa nezobuciko kanye nokuhlobisa kwasePhilippines futhi zigqokwa ngabesilisa nabesifazane ezikhathini ezikhethekile nezisemthethweni zasePhilippines. Izinhlobo zikotini zithengiswa kakhulu, kepha uma ufuna ukwenza okungokoqobo, yiya kulowo owenziwe imicu yeqabunga likaphayinaphu. Igqoke ibhulukwe elingaphandle - okungukuthi "ayinamathe".
Uma ngempela ufuna ukubheka "amadolo enyosi" hamba uye eVisayan Island yaseNegros uthenge amabarongs esalukiwe kusuka e-Abacá fiber (eyayibizwa ngokuthiwa Manila Hemp - eyenziwe ngesiqu sikaMoses textilis, uhlobo lwebhanana lwendabuko Philippines) ngemininingwane yokwakheka kwejometri kusuka ezintabeni kuya entshonalanga yeBais City.
IManila iyisikhungo sokupheka sikazwelonke futhi cishe zonke izifunda zasePhilippines zimelwe - kungaba ezindaweni zokudla zesifunda kuphela noma ezifakwe nezinye zokudla. Izindawo zokudlela ezivamile, noma ezenzelwe isigaba sabasebenzi noma abakhethiweyo, zinganikeza izitsha ezahlukahlukene eziphuma kuzo zonke izifunda futhi zinikeze cishe iphalethi lokunambitha lawo wonke umuntu. Isibonelo, isifunda esisenyakatho esibizwa ngokuthi i-Ilocos sinemali yokuthenga yaso eyintandokazi ebizwa ngePinakbet evunyelwe yiwo wonke umuntu kodwa isabonakala njenge-Ilocano fa.
Nazi ezinye izitsha zesifunda ezibonakala ezindaweni zokudlela, ama-canteens, nama-carinderias eManila:
I-Ilocanos, iningi lesizwe esicebile kunazo zonke izizwe eziseduzane namaTagalogs, saziwa njengabantu abakhuthele nabanothile abahlala emaphethelweni womhlaba olinganiselwe ongaboshwa phakathi kweLwandle lwase China kanye nohla lwezintaba zeCordillera enyakatho nesiqhingi saseLuzon.
IPinakbet - isidlo semifino esingethwe inhlanzi ebilisiwe
I-Papaetan - isicupho esivunyelwe nge-bile secretion
I-Central Luzon Island Region (Kapampangan)
I-Pampaguenos ihola phambili kwezobuciko bokuhlanganisa ama-legacies aseSpain nawaseChina amahle kakhulu.
URelleno - inhlanzi enkukhu noma inkukhu.
I-Pansit Palabok - isidlo se-noodle.
USisig - isidlo senyama esisikiwe noma wasolwandle okwenziwe ngawo imayonnaise futhi sithosiwe ngopelepele wePhilippine.
Baphinde bagqame kuma-dessert amahle afana neTuron de Casuy, Mazapan, Leche Flan neBiscochos Borrachos.
I-Adobo - manje ethathwa njenge-National Dish, ingulube, inyama yenkomo, inkukhu, noma cishe noma yini eshaywe ku-soya usoso noviniga.
ISinigang - Impendulo yasePhilippines kuTom Yam waseThailand, inyama noma ukudla kwasolwandle okubilisiwe esitsheni esimuncu.
I-Dinuguan - izitho zangaphakathi zezilwane ezifakwayo futhi eziphekwe ngegazi lengulube. (Qaphela: ukudla izitho zesilwane kwethulwa amaSpain).
I-Hipong Halabos - i-shrimp ebilisiwe.
I-Kari-Kari - izingxenye zenyama enongiwe ngemifino kanye nosiba oludotshwe yaphenduka isoso.
UBiya noGata - inhlanzi ephekiwe obisini lukakhukhunathi.
I-Pangat - inhlanzi ephekiwe ngaphandle kobisi lukakhukhunathi.
I-Southern Luzon Peninsula Region (Bicol)
IPinangat - inyama encane kakhukhunathi eyosiwe enama-shrimps noma inhlanzi enamanzi amnandi (udaka lwenhlanzi, itapia, ikatfish) kanye nopelepele oshushu okugoqwe ngamaqabunga e-taro bese upheka ubilisiwe obisini lukakhukhunathi oluhlanzekile.
UTanaguktok - (obizwa nangokuthi yi-sinanglay) izinhlanzi zigcwele utamatisi, u-anyanisi, ugalikhi, i-ginger kanye nopelepele oshisayo ongenakugwenywa owenziwe ngeqabunga likabhanana wabe esephekwa ngo-cocomilk.
UGulay na Natong - UTaro ushiya ephekiwe ubisi lukakhukhunathi.
I-Bicol Express (iresiphi yasendaweni) - isidlo esakhiwa i-70% ukhilimu wepelepisi onengxube yamafutha engulube, ama-shrimps amancane afakwe usawoti (endaweni yakini ayaziwa ngokuthi i-balaw) asikiwe ku-anyanisi, ugarliki, i-ginger kanti kwesinye isikhathi utamatisi uphekwe ku-cocomilk.
I-Pansit Molo - isobho nge-wanton efana ne-dumplings.
Laswa - imifino ephekiwe emanzini amancane nenhlanzi ebilisiwe.
I-Linakupang - inhlanzi eyosiwe.
Inasal - enye inhlanzi ephekwe ngamalahle.
AmaKadyos - imifino enenhlanzi noma inyama.
AmaCebuanos ahlala kulezi ziqhingi ezomile futhi eziyinyumba futhi adla ummbila kunokudla ilayisi okudla abantu. Baye bathonywa abaseMexico.
I-Corn Suman - isiphuzo esenziwe kusuka ekudleni okusanhlamvu sigoqiwe kabusha kushunqa.
I-Utap noma iHojaldres - ibhisikidi likaCebuano.
I-Eastern Visayas Islands Region noma i-Samar-Leyte
Ama-Warays angabathandi bobisi lukakhukhunathi akhiphe upelepele oshisayo.
IKinilao - inhlanzi eluhlaza ku-lime noviniga.
Uma kukhulunywa ngokudla, ngamafuphi, ukudla kwasePhilippines kungachazwa njengokudla ukunambitheka, hhayi ubuhlakani obuningi, kanye nokunakekela isethulo. Ukudla kuqeqeshelwa ukuba nokunambitheka okukodwa okuvelele - kungaba umunyu, ubumnandi, ukumuncwa kosawoti, noma ubumnandi buyathuthukiswa. Ngesizathu esithile, izithako ezisetshenzisiwe azinalo uhla olubanzi njengalezo ezingaphakathi Malaysia, IVietnam noma iThailand, omakhelwane bayo abaseduze.
Ingxenye kuphela yeminyaka eyikhulu yokubusa kwaseMelika yayanele ukusungula ama-burger kanye nenkukhu ethosiwe yasePhilippines njengezinto zokudla zansuku zonke, kuyilapho ama-tapsilogan kulapho udinga ukuya khona ukuthola ukufinyelela kwendabuko kwasePhilippines okusenakho konke okumnandi nokuyingqayizivele okuhlanganisa amasiko wokudla lapha.
AmaPhilippines angabathandi abakhulu beMcDonalds nePizza Hut, isitayela sabo sokudlela namamenyu. Ama-hotdogs emithini, ama-hotdogs kuma-buns, ama-hamburger noma ama-cheeseburger, ama-pizzas, ne-spaghettis konke kuyathandwa. Izithombe zabo zanda yonke indawo, kungaba njengokudla kwasemgwaqweni noma isidlo sakusihlwa. AmaManilans nawo athanda ama-donuts, ikakhulukazi avela kuMister Donut omkhiqizo wawo awumnandi njengabalingani bawo baseMelika.
UManila unamaketanga amaningi okudla okusheshayo aseMelika anjengoMcDonald's, uBurger King, uWendy, uPizza Hut, uSwayimane, uDairy Queen, uPizza kaShakey, iTaco Bell, iDunkin Donuts, i-TGIF, i-Italianni's, i-Outback ne-KFC. UJollibee, uzakwabo wasePhilippines weMcDonald's udlula umqhudelwano wakhe osuselwa eMelika, osebenesikhundla eside edolobheni isikhathi eside.
Izitolo zekhofi ezinjenge-Starbucks ne-Seattle's Best nazo zisanda kuba yindawo evamile ezitolo ezinkulu ezinkulu kanye nasezikhungweni zentengiso. Ukudla kungaphansi kakhulu njenge-US $ 2-3 kumajoyinti wokudla okusheshayo. Ukudla okujwayelekile kwe-burger ngama-fries nesiphuzo kungawela kuleli banga.
Okuhlangenwe nakho okwenziwe endaweni okwenziwa kakhulu eManila izingadi zikabhiya (noma izindlu zangotshwala njengoba zivame ukubizwa kanjalo). Zisakazeke kakhulu ezindaweni ezisebenza eSampaloc, Santa Mesa, Quiapo ngisho nezindawo zabavakashi base-Ermita naseMalate. Wonke amadolobha amadolobha anezindlela zawo zokuzijabulisa zabantu abadala, ibhulokhi, noma isifunda lapho kungatholakala khona lokhu kusungulwa. Lokhu kwenziwa ngocansi kakhulu. Kusebenza kakhulu amadoda asezingeni eliphansi nalabo abasebenza embuthweni wamasosha nowamaphoyisa angama-clientele amantombazane amancane agqokile futhi agqoka ngendlela evusa inkanuko noma abizwa ngokuthi ama-GROs noma ama-Guest Relations Offices akhonza amakhasimende. Ezinye izingadi zikabhiya zikukhuphulela ezingeni eliphakeme futhi ziba nezokuzijabulisa ezinhlangothini ngabadansi besudi eyizingxenye ezimbili abaphendukela eziteji. Uhlobo lokudla olukhonzwe lufana nesitayela seTapas saseSpain esukela kokulula njengokuthanga, ummbila, nophizi - okubilisiwe noma okujulile okuthosiwe kufakwe engadini efana nengulube ethosiwe, inyama yenkomo, inkukhu kuya endaweni efana nezinye izingxenye zomzimba - izindlebe, izimbiza , ama-livers, izinhliziyo, amathumbu, ubuchopho, amabhola, igazi, futhi yini onayo.
Okwezikhungo ezifana nehlobo lasentshonalanga le-pub, lezi zinhlaka zigxile eRemedios Circle esifundeni saseMalate indawo ebaluleke kakhulu yobusuku bokuphila, kanye naseBonifacio Global Village eTaguig City, eTomas Morato eSifundeni saseKamuning eQuezon City, nase-Eastwood e- Isifunda saseLibis, Idolobha laseQuezon. I-Bohemian Malate, indawo yakudala ye-Ermita ne-Baywalk edlula phakathi kwabo iqukethe izindawo ezahlukahlukene ezinikela ngokuhlanganiswa kokudla, amahlaya, utshwala nomculo bukhoma.